सुचना डबली डेस्क / २०७८, ३० बैशाख बिहीबार १३:०५ प्रकाशीत
सलमान शाह, काठमाडौं ।
आज बैठक, भोलि बैठक, आज यस्तो भयो, आज यस्तो मिलेन, भोलि यसरी हुनेछ, कहिले यो निवास कहिले त्यो निवास, निवासको वरीपरि चक्करमाथि चक्कर, सवारीसाधन दौडिरहेका छन्, बहस चल्दै छ, महोदयहरु ब्यस्त छन्, खाने(सुत्ने समेत समय छैन । धेरै ब्यस्त छन् ।
देश कोरोना भाइरसको चपेटामा परिरहेको छ । कस्तो अवस्थामा पुगिसकेको छ । त्यो सबैलाई थाहानै भएको हो । अझ महोदयहरुलाई धेरै थाहा छ । तर पनि होईन् महोदयहरुलाई पिडाले छोईसकेको भने भान हुँदैन । अहँ ! साच्ची डिस्टर्भ पनि नगरौं । यहाँ कुर्ची कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने दौडको तयारी हुँदैछ ।
दौड पनि यस्तो हुँदैछ जो कहिले हुन्छ । कहिले सकिन्छ । त्यस्तो कुनै टुंगो छैन् । सहभागि छन् । फेरी आयोजक भित्रनै उत्तिकै किचलो छ । कोहि दम्भमाथि उठन् सकेका छैनन् । सबैको नजर त्यति दौडमा पदक ल्याउनेमैं देखिन्छ ।
यसबीचमा हाम्रा महोदय खेलाडीहरुलाई न कोरोना संकटले पोलेको छ । न त् अन्य केहि कुराले नै । पिडालाई भुलेर खेलाडीहरु दौडमा अब्बल हुने प्रयासमा देख्दा वाह ! हाम्रा खेलाडीको को यो कस्तो डेडिकेसन, हेर्न लायक छ ।
यसो भनिरहँदा आजको अवस्था र अन्य समयमा धेरै फरक छ । राजनीतिमा त यी यस्ता कुरा नेपालका लागि नौलो होइन् । सधै त भईरहेन्थे र भविष्यमा पनि भईरहन्छन् । तर यसपटक धेरै नै भएको छ । गर्नेलाई भन्दा देख्नेलाई लाज । लाज पचेका महोदयलाई त् के लाग्थ्यो र ! लाग्ने भए देश यो स्थितिमा आउँने थियो र ! जताततै दुखद् खबर छ । सिमा लाग्यो धेग्न सक्ने अवस्था छैन् । यो अरु कसैले बोलेको होईन् निजि अस्पतालले बोलेको कुरा हो । सरकारी अस्पतालको हकमा केहिले बोली सके र कोहिँ बोल्न सकेका छैनन् । तर वस्तुस्थितिले प्रष्टाई सकेको छ । जुन हाम्रो लागि निहिती हो ।
आजको मितिसम्म आईपुग्दा उलेख्य नेपालीले अंकालमा आफ्नो प्राण गुमाएका छन् । अब रोग लाग्यो भाइरसको अगाडी कस्को के लाग्ने रहेछ भन्ने पनि छन् । यस्ता तर्क गरेर बचारु गर्ने झुण्डको पनि यहाँ कमि छैन् । तर कसरी बचाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा सोची दिने नेपालले पाएन दुखस्द कुरा यहिँ छ ।
यहाँ गुनासो आईरहेका छन् । घरबाट बाहिर निस्किनु साथ् केहि बाहेक धेरै लुट्न बसेका छन् । यहाँ एम्बुलेन्सले लुट्छ , औषधी साहुजीले लुट्छन् । पसले अस्पतालले अनेक नाममा लूटछन् र यस्तै रहिरह्यो भने अझै लुटिरहने छन् । दिन आएकै हो लुटेराहरुको । तर लुट्न दिदै पर्यो, टुलीटुली हेर्ने पर्यो । बाध्यता र पिडाको अगाडी झुक्नै पर्यो । तर कत्तिनै लुट्छौं ए ! मानवको खोल भिरेका दानव हो ।
अवस्था एकतर्फ यस्तो छ भने अर्कोतर्फ आफ्नो ज्यानलाई जोखिममा राखेर फ्रन्ट लाइनमा उत्तिकै स्वास्थ्यकर्मी लागेका छन् । थुप्रै कठिनाईका बीच अभाबका बिच यस लडाईमा होमिएका छन् । यसबीचमा कयौं स्वास्थ्यकर्मीले यो संसारलाई अलविदा पनि गरिसकेका छन् । विभिन्न कठिनाईलाई सम्झौता गरि अहोरात्र खटेका ति स्वास्थ्यकर्मी प्रति त् उच्च सम्माननै छ ।
हाम्रो स्वास्थ्य प्रणाली कस्तो रहेछ । प्रस्टै देखाएको छ । बेथिति र चलखेलको बारेमा सरकार चुईक्क बोल्दैन । तलबमा काम गर्ने क्षमजीविको यहाँ केहि दोष देख्दिन र छैन पनि । उनिहरु आफ्नो जिम्बेवारी पूरा गर्ने हो । सोही अनुरुप उनीहरुले आफ्नो जिम्मेवारीलाई इमान्दारीका साथ् पूरा गरिरहेका छन् । तर मालिकहरुले यहाँ धेरै नै, अत्तिनै गरेका छन् । यो कुरा जो पिडित छ उसले भोगेको कुरा हो ।
यी यस्तै घटना परि घटना देखेर होला । स्वास्थ्यलाई पूर्ण सरकारीकरण गरिनुपर्छ । भन्ने पनि बहस अहिले धेरै सुन्न पाईन्छ । प्रणालीमा चलेको देशमा स्वास्थ्य सरकारले मात्र चलाउने गर्छ र जनतालाई स्वास्थ्यमा पहुँच अझ नजिकबाट पुर्याउने गर्छ ।
यहाँ निजि उस्तै र सरकारीको अवस्था फेरी आफैमा सोचनीय छ । देश यस्तै छ । चलिरहन्छ । तर अब यी यस्तै कुरा मात्र गर्ने एक अर्कालाई दोष लगाई रहने अवस्था छैन् । जनता अक्सिजन नपाएर छ्टपटिरहेका छन् । अस्पताल जाउँ, बेड छैन । अस्पतालमा अवस्था यो छ कि कुनै विरामीले संसार छोडेपछि सो ठाउँमा भाग्यमानी सम्झिदै विरामी भर्ना हुने स्थिती छ ।
मानौं ५० क्षमताको अस्पतालले अहिले ३ सय जनालाईलाई ब्यबस्थापन गर्नु पर्ने स्थिती छ । स्वाभाविक छ, ५० जनाको लागत राख्ने अस्पतालले कदापी ३ सय जनालाई ब्यबस्थापन गर्न सक्दैन । गरे पनि भाती पुग्दैन । हो त्यसैको उदारण देखिदै आएका पनि छन् ।
हजारौं जनता यहीँ अवस्थालाई बुझेरै होम आईसोलेसनमा छन् । केहि प्रतिशत जो अलि जटिल अबस्थामा छन् । सोही अस्पताल पुगेका छन् । तर अस्पताल प्याक भए । अब के गर्ने, अब त महोदयको सिफारिस पनि चल्दैन । अब स्वयम् महोदय पुग्ने स्थिती आयो भने पनि गम्भीर छ ।
यस्तो दिन आउँला भनेर बेल्लैमा सोचिएन । यसअघि निर्माण भएका कोभिड अस्पताल , आईसोलेसन सेन्टर लगायत संरचना बर्खे खोलाझै आए र बिलाए पनि । कम्तिमा ती संरचनालाई यथावत राखेको भएपनि अहिले केही राहत हुने थियो ।
अघिल्लो पटक स्थानिय सरकार, प्रदेश र केन्द्र सरकार एकदमै सक्रिय देखिन्थे । त्यसको परिणाम पनि देखियो । विभिन्न कमि कमजोरीका बाबुजुत अवस्था नियन्त्रणमा आएकै हो।
हामीलाई लाग्यो आयो ,गयो र अब भुल्दा हुन्छ । हामी आफै विज्ञ बनौं । साबधानी अपनाएनौं । छिमेकी देश जो सक्रकणको मुख्य खानी हो । खानीकै चालमा हामी चल्यौं । त्यसबीचमा भारतमा भिडभाड ब्यापक भयो । कुम्भ मेला लाग्यो । चुनाव आए । र्याली भए । खेलकुद भयो यावत कुराहरु भए । नेपालमा पनि उस्तै कुरा राजनीति र्याली, बिरोध, खेलकुद यावत कुराहरु भयो ।
भाइरस जानकार र विज्ञहरु पनि टुलुटुलि हेरिरहे । स्वास्थ्य मन्त्रालय नामको मात्र देखियो । सचेतना र खबरदारी गर्ने काम लगभग देखिएन । नेपालका विज्ञको त कुरा छोडौं विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएसओ) को निर्देशन तथा सतर्कता मापदण्डलाई मज्जैले हामी नेपालीले पचाई दियौं।
यस्तै बहादुरी काम गरेपछि यो दिन आउँनेनै थियो । र आयो । विगतको पाठबाट त हामीले सिकेनौं नै तर अब सिक्नु पर्छ । सुधार गर्नुपर्छ । जनतालाई हत्या होईन जोगाउन तर्फ लाग्नुपर्छ । जनतालाई बचाउने जिम्मा राज्यको हो । त्यसका लागि राज्य इमान्दारीका साथ आफ्नो ड्युटीमा लाग्नुपर्छ । होईन भने जनताले जनताकै भाषामा सम्झाउने दिन चाडैं नआउँला भन्न सकिँदैन ।
लेखक अनलाइन खेलखवरका सम्पादक हुनुहुन्छ ।